Semalt ले SEO र अनलाइन मार्केटिंगमा सामान्य गल्तीहरू वर्णन गर्दछ
सामग्री मार्केटिंग एक आवश्यक अनलाइन मार्केटिंग संरचना हो जुन विगत केही बर्षहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। कुनै वेबसाइट वा अनलाइन दृष्टिकोण अनुसरण गर्ने कुनै पनि व्यवसायहरूले उनीहरूको सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीतिहरूको रूपमा एक अनलाइन मार्केटि emplo प्रयोग गर्दछ। धेरै संगठनहरू जसले एसईओ र अनलाइन मार्केटिंग एकीकृत गरेका छन् यसको क्षमताबाट ठूलो फाइदा उठाए। इन्टर्नेट मार्केटिंग सुनको खदान बन्न सक्छ यदि उचित रूपमा विस्तृत गरिएको थियो। यद्यपि यसबाट अधिक लाभ लिने कुनै प्रत्यक्ष विधि वा गाईड छैन। नतिजा स्वरूप, SEO पेशेवर र इन्टरनेट मार्केटर्सको कर्तव्य हो कि कुन कार्यनीतिले कार्य गर्दछ र कुनले प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, आर्टेम अब्गारियनले एसईओ र अनलाइन मार्केटिंग एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दा व्यवसायले गर्ने पाँच सामान्य गल्तीहरूको वर्णन गर्दछ।
१. गुणस्तर ब्याकलिंकहरू असफल
यो एक रणनीतिक लिंक निर्माण अभियान समावेश गर्न आवश्यक छ। गुगलले ईनबाउन्ड लिंकलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ। ब्याकलिks्कहरूले अन्य वेबसाइटहरूबाट गुणस्तरीय ट्राफिक प्रदान गर्दछ जसले बिस्तारै बिस्तारै रूपान्तरण गर्दछ अन्य साइटहरू जुन मोनेटाइजेशन रणनीतिहरूमा संलग्न छन्। उदाहरण को लागी, ब्याकलिंकहरु तपाइँको साइट को अवसर को रूप मा कार्य गर्दछ। नतिजाको रूपमा, सामग्री मार्केटरले लि building्क निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ किनकि खोज ईन्जिन एल्गोरिथ्म उनीहरूमा निर्भर गर्दछ।
२. एक अनसाइट सामग्री रणनीति हुन विफलता
खोजी ईन्जिनहरूले सामग्रीको गुणस्तरको आधारमा एक वेबसाइटलाई दर्जा दिन्छ। धेरै विपणकहरू साइट एसईओ अटोमेसन उपकरणमा असंख्यको लागि खस्छन् जुन कहिलेकाँही खराब अन्त हुन्छ। उदाहरण को लागी, लेख को स्पिनि। र कुञ्जी शब्द भरिभरी को रणनीति अक्सर वेबसाइटहरु Google को बाहिर समाप्त हुन्छन्। सामग्रीको गुणस्तर, लेख र सामाजिक संकेतहरू गुगलले पृष्ठमा पुग्ने केही तरिकाहरू हुन्। उचित व्याकरण, उपशीर्षकहरू र उत्कृष्ट सामग्री प्रयोग गर्न राम्रो छ जुन पर्याप्त शीर्षकलाई कभर गर्दछ।
Enough. यो पर्याप्त समय छैन
अर्गानिक खोज र्याकिंग एकदम अस्थिर छ र सजीलै अन्तमा तपाईंको वेबसाइटको स्थिति कम गर्न सक्दछ। प्रभावी एसईओ एक लामो समय प्रक्रिया हो, एक समय चीज होईन। धेरै व्यक्ति जो अनलाइन सामग्रीको मार्केटिंगमा सफल छन् छोटो अवधि भन्दा दीर्घकालीन लक्ष्यों र रणनीतिहरूमा निर्भर छन्।
The. अभियानमा पर्याप्त बजेटको लागि अनुमति छैन
SEO लाई यसको विभिन्न पक्षहरूको लागि काम गर्न सभ्य बजेट विनियोजनको आवश्यकता पर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा सामग्री विपणकहरू एसईओ अटोमेसन उपकरणहरूको लागि गिरेका छन् जुन प्राय जसो केसहरूमा उनीहरूले दिने प्रतिज्ञा प्रदान गर्दैनन्। एकले पर्याप्त कुञ्जी शब्द अनुसन्धान, होस्टिंग, फ्रिल्यान्स सामग्री लेखक र मार्केटरहरू भाडामा लिनको लागि पर्याप्त पैसा प्रयोग गर्नुपर्दछ। एक राम्रो वेबसाइट अतिथि पोष्टिंग, राम्रो इनबाउन्ड लि as्किंगका साथसाथै सोशल मिडिया मार्केटिंग मार्फत ब्रान्ड छवि निर्माणमा प्रमुख हुनेछ।
The. कार्य भार वितरण नगर्दै
जब अनलाइन मार्केटिंग गर्दै, त्यहाँ धेरै कार्यहरू छन् जसलाई आवश्यक रूपमा केहि उच्च स्तरको सीप र कडा परिश्रमको आवश्यक पर्दछ। नतिजा स्वरूप, यी सबै कार्यहरू एक्लै प्रदर्शन गर्दा कामको गुणवत्ता मात्र घटाउँदैन तर SEO युक्तिहरूको प्रभावकारिता पनि कम गर्दछ। एसईओ प्रक्रियाबाट उत्तम प्राप्त गर्नका लागि अत्यधिक अनुभवी पेशेवरहरूको टोलीले सद्भावका साथ काम गर्नु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, एक dotwriter जस्तै वेबसाइटहरु बाट एक स्वतन्त्र लेखक को लागी तपाईको ब्लग को लागी सामग्री बनाउन सक्दछ। अर्को आयाममा, एकले सोशल मिडिया मार्केटरहरूलाई भाँडामा लिन सक्छ
एसईओ एक जटिल प्रक्रिया हो र ईरको लागि उच्च स्तरको भक्ति चाहिन सक्छ। माथि देखाईए अनुसार धेरै कारकहरू एसईओ सफल बनाउन प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि, खराब अभ्यास र प्रविधिको परिणामले ठूला गल्तीहरू हुन्छन्, जुन सामग्री विपणकहरूले विशेष गरी एसईओ इनपुटलाई छुट दिनेमा गर्दछ। कहिलेकाँही, आधारभूत एसईओ उपकरण भन्दा पर, सामग्री मार्केटरहरूले एसईओ परामर्शदाता वा विशेषज्ञहरू राख्नु पर्छ कुनै पनि एसईओ टास्कमा गर्नको लागि उपयुक्त चालमा निर्देशन प्राप्त गर्न। यी सबै गल्तीहरू घातक छैनन्, तर उनीहरूको वेबसाइटका लागि SEO काम गर्ने जो कोही स्पष्ट रहनु पर्छ।